भेन्टिलेटर विदेशमा अड्कियो, यता ज्यान गयो « Naya Page
प्रकाशित मिति :2June, 2020 6:35 am
काठमाडौं, २० जेठ । कोरोना भाइरसको संक्रमित बिरामीका लागि ल्याउन लागिएकोे भेन्टिलेटर विदेशमा अड्किएको छ ।
सरकारले ५ हजार संक्रमित हुने अनुमान गर्दै आवश्यक सामग्री जोहो गर्ने तयारी गरे पनि अपुग हुने देखिएको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेका अनुसार संक्रमितको संख्या ५ हजारभन्दा बढी हुने निश्चित छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले संक्रमणयुक्त स्थानबाट आएका नेपालीलाई सीमावर्ती क्षेत्रमा राखिएको क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित हुँदा संक्रमण झन् बढेको बताए । उनले भने, ‘क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति नै असुरक्षित देखिएका छन् । संक्रमित व्यक्तिसँगै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। यस कारण पनि भाइरस सर्ने र संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ ।’
सोमबार २ सय ३९ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार कोरोना भाइरस पोजेटिभ पुष्टि भएका संक्रमितको संख्या १ हजार ८ सय ११ पुगेको छ । संक्रमितमध्ये निको भई अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुनेको संख्या २२१ पुगेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टबाट